မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ငိုက်မရှက် (သို့) စကာင်္ပူရောက် အလွဲများ (၇)
Posted by mabaydar at 11:07 AM
မှီအိပ်နေတုန်း မဆလာနံ့ မရဘူးလား မဗေဒါ...ဟဲဟဲ
သြော် .. ဖစ်ရမယ် .. :D
Knowledge Sharing Man said...
အိပ်တော့အိပ် ပါ သတိထားပေါ့ ။ မဗေဒါ photo internet ပေါ်ရောက် လာ မှ ဖြင့်။
ကုလားကြီး က အဘား အဘား ကန်မလေး နင်ငါ့ကို ဘာမှတ်နေလဲ ဘာညာနဲ့ မအော်ဘူးလား။ ဟီးဟီး။ :D
သြော် သူမသိလိုက်ရှာဘူးကို ....
ငိုက်မရှက် သေချာရဲ့လားမဗေဒါ… (ဟီး…. နောက်တာနော်။)
အဲဒိကုလားက နဲနဲတော့သန့်တယ် နွေးနေခြည်ရဲ့.. ဒါပေမဲ့ အရမ်းအိပ်ငိုက်နေလို့ပဲ အနံ့မရတာလားတော့သိဘူး..
knowledge sharing man ရေ.. အဓိပ္ပါယ်ကြီးကလဲ တညိုးကြီးပါလား..
ကိုဇက်တီရေ.. ထူးဆန်းတာကမအော်ဘူး.. ကုလားက ကောင်မလေး သူ့ပုခုံးပေါ်လာအိပ်လို့ပဲ ကြည်နူးနေလား.. စိတ်ထားပြည့်လို့ ရှက်သွားမှာစိုးလို့ပဲ ညိမ်ခံနေလားတော့သိပါဘူး.. ဘာပဲ ပြောပြော ကျေးဇူးပဲ တင်ရမလိုလို..
Anonymous ရေ ဘာကို မသိလိုက်တာလဲဟင်.. အဲဒိရထားပေါ်မှာ အမည်မသိမိတ်ဆွေပါလာလို့လား.. အဟီး..
ကိုပေါရေ.. ငိုက်နေတုန်းမရှက်တာတော့သေချာပါတယ်.. ငိုက်ပြီးမှ ရှက်တာ.. အဟတ်.. ဟတ်..
အဟား အမကတော့ လုပ်ပြီ ဖတ်ရင်နဲ့ကို ရီနေရတယ် အဟားဟား အငိုက်လွန်တာ နောက်တခါများတွေ့ခဲ့ရင် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဦးမှ အဟား ဟား
အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ တောင်ပေါ်သားရယ်.. စကာင်္ပူမှာဆိုတော့ မပြောနိုင်ဘူး ကြုံရင် ကြုံမှာ.. ဟိုတစ်နေ့ကပဲ ကိုညီညီနဲ့ မစကားပန်း၂ယောက် ရှေ့မှာ ငုတ်တုတ်ကြီးလာထိုင်တာကို အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မမှတ်မိဘူး.. ကားပေါ်က ဆင်းခါနီးမှ မေးလိုက်ရတယ်.. အဟီး..
3/26/2009 4:16 PM
3/26/2009 5:44 PM
ရီရတယ်ဗျို့ - အိပ်နေတုန်း ဟောက်သံတွေရော ထွက်သေးလား... ကျနော်ဆိုရင် ဟောက်သံပါထွက်မှား)
ဟားဟား ဖြစ်ရလေ မဗေဒါရယ်.... ဖြစ်ပျက်နေမယ့် မျက်နှာကို မြင်ယောင်လိုက် ရီလိုက်နဲ့ ဒီမနက်ကတော့ တော်တော်ကို စိုပြေသွားပါတယ်
အဟက် တော်တော်ရီလိုက်ရတယ်..။ ကုလားကြီး.. ..အဟား..။ ဖြစ်ရလေ..။ ပထမဆုံးလာမန့်တာပါ..။
3/27/2009 9:35 AM
ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရော... သူများတွေကိုမြင်ဖူးတာရောမှာ ရထားပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေဟာ လန့်နိုးပြီးရင် ရှက်ရှက်နဲ့ ဆက်အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လေ့ရှိကြတယ်..။
တရုတ်ကောင်ကသူချောလို့ ဇာတ်လမ်းလုပ်တယ်လို့မထင်တဲ့အပြင် စိတ်တောင်ဆိုးနေလားမသိ၊ သူ့ကိုတောင်ဂရုမစိုက်ပဲ စထိုင်တာနဲ့အိပ်နေလို့ဆိုပြီးတော့လေ။
3/27/2009 11:17 AM
3/27/2009 6:39 PM
နောက်ပါ့ကွယ်။ Stomp မှာတောင် ပါသွားပြီလားမသိ။
ဟိ ဟိ ဗေဒါမကတော့ လုပ်တော့မယ်
3/28/2009 4:34 AM
ကုလားကြီးတော့ ချမ်းသာပေးပါဟာ....... အိမ်မက်တွေ သွားမပေးပါနဲ့....ဟီးးးးးး ဟီးးးးးး
မဗေဒါတို့များ လွဲလိုက်ချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပဲ...း)
3/29/2009 3:25 AM
Everybody working in Singapore under pressure, is the same story. Nobody disturb you. Carried out.
မဗေဒါက ရေရှားတာသိတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်
မဖြစ်ညစ်ကျယ်လေး ဘာသွားလုပ်ရမှာလဲ ဆိုလားးP
4/22/2009 9:43 AM
Shit burmese ma twe. nin lin Chinese so yin taw pyaw te ma lar. thate ma pu ne, Bamapyi le China phet taw mar par.
Thanks for your rude comments Anonymous, I am sure i didn't mean any discreminating upon indian. You yourself feeling insecure. Either chinese or indian, we are all same. The differences just lie individual mind. I even writtien that i should thank that indian for let me sleep on his shoulder. Why are u feeling so inferior?
6/27/2009 2:37 AM
ကိုယ်တော့ ဘတ်စကားပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားဖူးတယ်။ ပိုလီကျောင်းသားဘဝက စားပွဲထိုးပြီးပြန်လာတာ ပင်ပန်းလွန်းလို့။ ကားက Interchange မှာ ဂိတ်ထိုးပြီးမှ Driver က ခုံကို ထုပြီးလာနှိုးတာ။ :D မှတ်မှတ်ရရ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတယောက် အိပ်ပျော်သွားဖူးတယ်။ အစကတော့ သူ့ခေါင်းကို ရှောင်ပေမဲ့ ရှောင်လို့မရတော့လဲ ပေးအိပ်လိုက်တယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက်။ နောက် သူ့မှတ်တိုင်ရောက်တော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဆင်းသွားတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့။ ငါ့ကို Thank you လေးတောင်မပြောသွားဖူးလို့။ အခု မဗေဒါ Post ကိုဖတ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ သူလဲ ရှက်သွားလားမသိ။ :)
11/11/2013 11:25 AM